उपचारमा लापरबाही हुदा गर्भवती महिलाको मृत्यु | Hulaki Online
उपचारमा लापरबाही हुदा गर्भवती महिलाको मृत्यु
बुटवल । उपचारमा भएको बेवास्ता र लापरबाहीले सुत्केरी हुन अस्पतालमा भर्ना भएकी एक गर्भवती महिलाको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा मंगलबार मृत्यु भएको छ।
मृतकका आफन्तका अनुसार डा. विवि राउतसँग नियमित जाँच गराएकी राधिका चिकित्सककै सल्लाहमा आईतबार अस्पतालमा आएकी थिइन्। अस्पतालले भने ठाउँ नभएको भन्दै सोमबार बोलाएको थियो। सोमबार बिहान साढे ६ बजे पुन अस्पताल आएकी उनलाई पाठेघर नखुलेको बताउँदै डाक्टरले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताएका थिए। तत्काल शल्यक्रियाका लागि बिहान १० बजे चिकीत्सकहरुले आफन्तको मन्जुरी समेत लिएका थिए। नर्सले भने अस्पतालमा पालो नपाएको भन्दै दिउसोबाट व्याथा लाग्ने सुई तथा औषधी दिएर राखेका थिए।
लगातार वेथा सहेकी राधिका राति १२ बजेदेखि आत्तिएकी थिइन्। वेथासँगै अत्यधिक रक्तश्राव र कम्पन सुरु भएपनि नर्सहरूले भने सामान्य अवस्था छ भनेर बेवास्था गर्दा बिरामीको मृत्यु भएको कुरुवा सासु भिमकला पाण्डेले गुनासो गरिन्। ‘रातभरि उनी आत्तिइन्, पटक पटक नर्सलाई बोलाउन गयौं’ उनले रुँदै भनिन् ‘तर नर्सहरू हेर्न पनि आएनन्।’
बृद्ध आमा र सासुसँग अस्पताल बसेकी उनले बिहान करिब ३ बजे सहन गाह्रो भएको र नर्सहरु नभेटिएको भन्दै आफन्तलाई फोन गरेर बोलाएकी थिइन्। अस्पताल आएका मामामाइजुलेे खोजी गरेपछि बिहान करिब साढे ४ बजे मात्रै चुकुल लगाएर बसेका नर्सहरू ढोका खोलेर बाहिर आएका थिए। बेडमै दिसापिसावसहित रक्ताम्य भएकी बिरामी छेउ भने नगएको माइजु इश्वरा तिवारीले गुनासो गरिन्। नर्सले नहेरेपछि उनीहरू कोही डक्टर खोज्न त कोही बिरामी सम्हाल्न खटेका थिए।
अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरीटेण्ड डा. किरणमणि पौडेलले गर्भवतीको फोक्सो र मुटुले काम नगर्दा मृत्यु भएको बताए। पाठेघर नखुलेको र ठूलो शिशु भएकाले मंगलबार बिहान शल्यक्रिया गर्ने तयारीमा रहेपनि शरीरको रगत र पानी सकिएर अचानक मृत्यु भएको उनले दावी गरे।